बालिका बलात्कार गर्ने अभियुक्त प्रहरी थुनामा – Halkaro
बालिका बलात्कार गर्ने अभियुक्त प्रहरी थुनामा
चितवन । बालिका जवरजस्ति करणीको आरोपमा पक्राउ परेका कालिका नगरपालिका बस्ने एक युवालाइ थुनामा राखेर अनुसन्धान थालिएको छ । चितवनको इच्छाकामना गाउंपालिका घर भएकी १३ बर्षिय बालिकालाइ विवाह गर्ने प्रलोभन देखाएर जवरजस्ति करणी गरेको आरोपमा कालिका नगरपालिका वडा नं. १ गैरीबारी बस्ने २४ बर्षिय सुरज भुजेललाइ माइति नेपालले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो ।
माइती नेपाल नारायणगढले गत चैत ३ गते एक ट्रकमा चेकजांच गर्दा बालिका सहित भुजेललाइ फेला पारेको थियो । शंकास्पद रुपमा फेला परेपछि बालिकालाइ माइति नेपालले उद्धार गरेको थियो । बालिकालाइ पछि सोधपुछ गर्दा फागुन १९ गते उनि हजुरआमालाइ भेट्न इच्छाकामना गाउंपालिका वडा नं. ६ कुयलघारी गएकी थिइन् ।
हजुरआमाको घरमै पुगेका भुजेलले बालिकालाइ विवाह गर्ने प्रलोभन देखाएर मुग्लिनको एक होटलमा लगेर बास बस्ने निहुंमा जवरजस्ति गरेको पिडितका दाजु नविन प्रजाले दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । नविन प्रजाले गत चैत ४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए ।
पिडकको म्याद थप भएर अनुसन्धान भइरहेको माइति नेपाल चितवनका कार्यक्रम संयोजक इश्वर गिरीले जानकारी दिए ।
← नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको म्याद थप गर्न माग
गैँडा तस्करीमा संलग्न ९० जना अझै फरार →